Blu-Ray 720p – Quality – Channel Myanmar
Lazy Hazy Crazy (2015) အမှန်ဆို 18+ ဆိုတာနဲ့ အိပ်ရာပေါ် ဝုန်းဒိုင်းပြေးတက် ဒချိ ဒချိ တွေ ကို ကျနော် တကယ်ကြီး မကြိုက်ပါဘူး တစ်ခါလာလဲ ဝုန်း တစ်ခါလာလဲဝုန်း ဇတ်လမ်းဇတ်ကွက်က ဝုန်းတဲ့ ဇတ်ဆို Pron ကားတွေ ကြည့်တာပဲ အကျိုး ရှိပါတယ်.. ကျနော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ 18+ ထဲ မနက်ဖြန် တင်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားလေးလဲ ပါပါတယ်... တရုတ်မလေး ကျောင်းသူ ၃ ယောက် ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ် ပါ... ချွိုင် ၊ ပင်ကီ ၊ ထရေစီ ဆိုတဲ့ သုံးယောက်ပါ ချွိုင် နဲ့ ပင်ကီ က အိမ်ကို အားမကိုးပဲ ကျောင်းလခ အိမ်ငှားခ တွေကို ရှာနေကြရတဲ့သူတွေပါ ဘယ်လိုရှာလဲတော့ မမေးနဲ့ We Chat လို အကောင့်တွေကနေ အော်ဖာ ရှာပါတယ် တစ်ညအိပ် ၅ ထောင်လောက် ခိုင်တယ် လူကသာ အထက်တန်း ကျောင်းသူ ပညာကတော့ အိမ်ရှင်မ အဆင့်ကျော်နေပါပြီ... သူတို့ သူငယ်ချင်း အရိုးခံလေး ထရေစီ ...
The Last Tree (2019) The Last Tree 2019==============#Unicodeလန်ဒန်မြို့ လူမည်းတွေအများဆုံးနေတဲ့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်က လူမည်းကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြီးပြင်းလာတာကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ကလေးဘဝက စိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိခဲ့တဲ့ ဒီကောင်လေး လူရမ်းကားပေါတဲ့ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ လူငယ်တွေမှာလည်း ဖိအားတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ မိဘကြောင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်၊ သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် စသည်ဖြင့် ဖိအားအမျိုးမျိုးခံနေရတဲ့အချိန်မှာ ထွက်ပေါက်ရှာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီဖိအားတွေက လွတ်နိုင်အောင် သာယာမှုရှာကြတဲ့အခါ လမ်းမှားကို ရောက်နိုင်ခြေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှားနေပြီဆိုတာ သိပြီး ပြန်ပြင်နိုင်ခဲ့ပြီး အရင်က မှားယွင်းခဲ့တဲ့အမြင်တွေကိုလည်း ပြန်တည့်မတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကထဲကနေ ဒီကောင်လေး ခံစားနေရတာတွေကို ကိုယ်စားဝင်ခံစားနိုင်အောင်တော့ ရိုက်ပြနိုင်တယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ #Zawgyiလန္ဒန္ျမိဳ႕ လူမည္းေတြအမ်ားဆုံးေနတဲ့ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္က လူမည္းေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾကီးျပင္းလာတာကို ရုိက္ျပထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပါ။ ကေလးဘဝက စိတ္ဒဏ္ရာေတြရွိခဲ့တဲ့ ဒီေကာင္ေလး လူရမ္းကားေပါတဲ့ ဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ...
Ford v Ferrari (2019) Ford v Ferrari (2019) IMDb - 8.1/10_______Rotten - 92% won2Oscars. Another 21 wins & 73 nominations #Unicode ပြိုင်ကားထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်တော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် လမန်းစ် ကားပြိုင်ပွဲဟာ အရေးအကြီးဆုံး မှတ်ကျောက်တင်ခံရတဲ့ ပွဲပါပဲ။၂၄ နာရီတိတိ ပတ်လမ်းတွေထဲမှာ တစ်နာရီကို မိုင် ၂၀၀ နှုန်းလောက်နဲ့ တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် ပတ်နေရတဲ့ ပြိုင်ပွဲပါပဲ။ ကားတစ်စီးရဲ့ အမြန်နှုန်း၊ ခံနိုင်ရည်၊ စိတ်ချယုံကြည်ရမှု ကို အကောင်းဆုံး စမ်းသပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး အသက်ဘေးလည်း နီးတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလို ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ ဖရာရီကားကုမ္ပဏီက ၆ နှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲထားခဲ့တဲ့အတွက် ပြိုင်ကားလောကမှာတော့ အဲဒီခေတ်မှာ ဖရာရီဟာ ပြိုင်ဘက်ကင်းပါပဲ။ ဒီ ဖရာရီအီတလီကားကုမ္ပဏီကို ဖို့ဒ်က ဝယ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါ ဖရာရီကားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် အန်ဇိုက ဖို့ဒ်ကို စော်ကားမော်ကား ပြောပြီး ...
Contagion (2011) (Unicode)ခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့H1 N1 ရောဂါအကြောင်းကို ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါဘတ်သ်အမ်ဟို့ဖ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဟောင်ကောင်ကိုသွားပြီး ပြန်အရောက်မှာ နေမကောင်းဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်သေဆုံးရာကစခဲ့တာပါတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကူးစက်ခံရသူတေ် များလာတယ် သေဆုံးသူတွေလဲ များလာပါတယ်WHO အဖွဲ့ရော ဒေါက်တာရှီဗာတို့ရော ဒေါက်တာဆော့စ်မန်းတို့ရောဘာဖြစ်တာလဲသိဖို့ အားလုံးကြိုးစားရှာဖွေကြရပါတယ်ဒီထဲမှာမှ ဘယ်သူကရှာဖွေတွေ့ရှိသွားလဲကုသနိုင်တဲ့ဆေးရှာတွေ့မှာလားကာကွယ်ဆေးရောပေါ်လာလားဆိုတာတွေရှာဖွေနေစဉ်အတောအတွင်းမှာ စတေးလိုက်ရတဲ့ အသက်တွေလူထုကြား ရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုတာ သတင်းပျံ့သွားတဲ့အချိန်မှာ လူထုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လာလဲဆိုတာတွေ အားလုံး ဝေဝေဆာဆာနဲ့ အကွက်ကျကျရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါဒီလိုအချိန်မှာ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးလို့ ညွှန်းပေးပါရစေဗျာအချုပ်အနေနဲ.ပြောရရင် Steven Soderberg ရဲ့ 2009 Flu Pandemic ကို အခြေတည်ရိုက်ထားတဲ့ Contagion (2011) ဇာတ်ကားက အခုအချိန် ကြည့်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးပဲ။Pandemic Event အတွင်း- WHO ရဲ့ စီမန်ခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်တွေ၊- Medical Field ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် မလုံခြုံမှုတွေ၊- ဝိသမလောဘသားတွေရဲ့ အမြတ်ထုတ်ခြယ်လှယ်မှုတွေ၊- နောက်ဆုံး လူထုကြားမှာဆင့်ပွားလာတဲ့ အကြောက်တရားတွေ အကြောင်းကိုဒီကားမှာ ...
The Witch (2015) (Unicode)IMDB 6.8Rotten Tomatoes 90%အိမ်ထောင်ဦးစီး William..၊ သူ့ဇနီးသည် Katherine..၊ သမီးကြီး Thomasin..၊ သား Caleb..၊ အမွှာနှစ်ယောက် Jonas နဲ့ Mercy တို့မိသားစုဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့နေထိုင်ရာအရပ်ကနေ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့မိသားစုဟာ လူသူဝေးရာ တောစပ်တစ်နေရာမှာ အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်လို့ အေးအေးလူလူ နေနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ အခြေချပြီး မကြာခင်မှာပဲ Katherine က Samuel ဆိုတဲ့ ကလေးလေးကို မွေးဖွားခဲ့သေးတယ်။အချိန်ကာလက ၁၇ ရာစု၊ New England တစ်နေရာ။ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်တော့ သူ့အမေကိုယ်စား Samuel လေးကို ထိန်းပြီး Peekaboo (ဒီမှာဆို တူတူရေဝါး ဆိုတာမျိုး) ဆိုတဲ့ကစားနည်းလေး ကစားနေရင်းနဲ့Thomasin ...
28 Days Later… (2002) (Unicode)IMDB 7.6Rotten Tomatoes 86%သင် အိပ်ယာကနိုးပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပျက်စီးသွားပြီရင် သင်ရော ဘာလုပ်မှာလဲ။ဂျင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ကားအက်စီးဒင့်တစ်ခုကြောင့် ဆေးရုံပေါ်မှာ နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။အရာအားလုံးဟာ တိတ်ဆိတ်နေပြီး မြို့ပြကြီးဟာလည်း သုဿန်တစပြင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာကို သူ့အနေနဲ့ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်တစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာ သူသိလိုက်ရတဲ့အခါ သူဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ၊ချစ်ရတဲ့ မိသားစုမရှိတော့တဲ့ ဘဝမှာ သူ ဘယ်လိုဆက်ရှင်သန်မှာလဲ ၊ ဘယ်ကို သွားရမှာလဲ ၊ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးရမှာလဲ။၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇွန်ဘီကားထဲမှာ ဇွန်ဘီဗိုင်းရပ်ထက်စာရင် ရန်သူငါးပါးထဲမှာ လူသားတွေကသာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြသွားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားရဲ့အောင်မြင်မှု့ကြောင့်ပဲ 28 Weeks Later (2007) ကားကို ဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Kiwi ပါ)(Zawgyi)IMDB ...
Shaft (2000) (Unicode)၂၀၁၉ ထွက် ရှက်ဖ် ကို အတော်များများ ကြိုက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆမ်မြူရယ် ဂျက်ဆန် ကြီးက အထာကျတာကိုး။ဒီကားကတော့ ဂျွန်ရှက်ဖ် တစ်ယောက် စုံထောက်အလုပ်ကနေ ဘယ်လိုထွက်လာပြီး အလွတ်စုံထောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။သူနဲ့အပြိုင်ဗီလိန်မင်းသားက ခရစ်ရှန်ဘေး ဆိုတော့ အတော်ကောင်းနေတာပါပဲ။ဒီဇာတ်လမ်းအစမှာ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးရဲ့ သားတစ်ယောက်က ကလပ်မှာ လူသတ်လိုက်တယ်။တရားခံကို ဖမ်းပေးလိုက်နိုင်ပေမယ့် သက်သေက ထွက်ပြေးနေလို့ အာမခံရသွားတယ်။ဒီအမှုကို တရားမျှတမှုရဖို့ ရှက်ဖ်ကြီး သဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Littleneo ပဲဖြစ်ပါတယ်….(Zawgyi)၂၀၁၉ ထြက္ ရွက္ဖ္ ကို အေတာ္မ်ားမ်ား ႀကိဳက္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ဆမ္ျမဴရယ္ ဂ်က္ဆန္ ႀကီးက အထာက်တာကိုး။ဒီကားကေတာ့ ဂြၽန္ရွက္ဖ္ တစ္ေယာက္ စုံေထာက္အလုပ္ကေန ဘယ္လိုထြက္လာၿပီး အလြတ္စုံေထာက္ျဖစ္လာလဲဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပါ။သူနဲ႔အၿပိဳင္ဗီလိန္မင္းသားက ခရစ္ရွန္ေဘး ဆိုေတာ့ အေတာ္ေကာင္းေနတာပါပဲ။ဒီဇာတ္လမ္းအစမွာ သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးရဲ႕ သားတစ္ေယာက္က ကလပ္မွာ လူသတ္လိုက္တယ္။တရားခံကို ဖမ္းေပးလိုက္ႏိုင္ေပမယ့္ သက္ေသက ထြက္ေျပးေနလို႔ အာမခံရသြားတယ္။ဒီအမႈကို တရားမွ်တမႈရဖို႔ ...
The Physician (2013) (Unicode)ကမ္ဘာကြီးက အပြားကြီးလို့ပြောရင် ကားစင်ပေါ်တင်ပြီး အသတ်ခံရတဲ့ ၁၁ရာစုခေတ်မှာဒီနေရာမှာ နှလုံးရှိတယ် ဒီနေရာမှာ ကျောက်ကပ်ရှိတယ်လို့ သွားပြောရင် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါသလဲ။ဘာသာရေးအပေါ် Serious ဖြစ်လွန်းတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ရောဘ်ကိုးလ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ လူတစ်ယောက်ကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒီလူသေတော့မယ် မသေဘူးဆိုတာ တပ်အပ်သိနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိသူတစ်ယောက်ပါ။အမေကလည်း ကပ်ရောဂါနဲ့သေ မိသားစုတွေကလည်း တစ်ကွဲတစ်ပြားဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘာဘာလို့ခေါ်တဲ့ နယ်လှည့်ဆေးရောင်းတဲ့ လူကြီးနောက်ကို လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ရက်မှာ ဘာဘာကြီးရဲ့မျက်လုံးကို သွားဆေးကုရာကနေ ပါရှားဖက်က ဆေးတက္ကသိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုဂျူးတွေဆီက ကြားပြီးနောက်ပိုင်း ပညာသွားသင်လိုစိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သို့ပေမယ့် ပါရှားနယ်ဖက်ဆိုတာ သူတို့လို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝန်တွေကို ကန့်သတ်ထားတဲ့နယ်မြေဖြစ်တာကြောင့် ဂျူးလူမျိုးယောင်ဆောင်ပြီး သွားရပါတော့တယ် ။ဒီကားဟာ စာရေးဆရာကြီး Noah Gordon ရဲ့ El médico ဆိုတဲ့ဝတ္တုကို ပြန်အသက်သွင်းထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Kiwi ပါ)(Zawgyi)ကမာၻႀကီးက အျပားႀကီးလို႔ေျပာရင္ ကားစင္ေပၚတင္ၿပီး အသတ္ခံရတဲ့ ၁၁ရာစုေခတ္မွာဒီေနရာမွာ ...
The Current War (2017) (Unicode)ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ၁၈၈၅ ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သောမတ်အက်ဒီဆင်၊ နီကိုလာ တက်စလာ၊ ဂျော့ ဝက်စတင်ဟောက် တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေကို အခြေတည်ထားတာပါ။အက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်ကို မကြားဖူးတဲ့သူ ရှားပါလိမ့်မယ်။ဒီရုပ်ရှင်မှာလည်း ဥာဏ်ကြီးရှင်ဇာတ်ရုပ်တွေအတွက် မွေးလာသလို့ထင်ရတဲ့ မင်းသားပဲ သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ဘန်နီဒစ် ကမ်းဘားဘက်ခ်ျ ပါပဲ။သူ့ရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်တော့ စပိုက်ဒါမန်းမင်းသား တွမ်ဟော်လန် က ပါဝင်ထားပါတယ်။နီကိုလာတက်စလာ အဖြစ်တော့ နီကိုလတ်ဟောက်ထ် က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။သူ့ကိုတော့ x-men အဖြစ်ရော warm bodies ထဲက ဇွန်ဘီးအဖြစ်ရော သိကြမှာပါ။သူတို့တွေရဲ့ အဓိက အားပြိုင်မှုကတော့ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး စျေးကွက်မှာပါပဲ။အက်ဒီဆင်က DC Current ကိုအသုံးပြုပြီး AC ဟာ လူသေနိုင်ချေ အရမ်းများတဲ့အတွက် အသုံးမပြုခဲပါဘူး။ဂျော့ဝက်စတင်ဟောက်နဲ့နီကိုလာတို့ကတော့ ဒီစီထက် သုံးဆလောက် စျေးသက်သာမယ့် အေစီနဲ့ စျေးကွက်ကို ယှဉ်ပြိုင်လာပါတယ်။ဒီတော့ အက်ဒီဆင်က အေစီတွေဟာ လူသေစေနိုင်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ကို တီထွင်ဖို့ ...
Defiance (2008) (Unicode)IMDB 7.2Rotten Tomatoes 57%Audience Score 72%ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဟာ စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားခဲ့ဖူးပါဘူး ။ဒါကြောင့်လဲ အချို့နိုင်ငံရေး Post တွေမှာဆိုရင် ချပစ် သတ်ပစ် ဆိုတဲ့ Comments တွေကို အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။၁၉၄၁ခုနှစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဟစ်တလာဟာ ဘီလိုရုရှားနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ် ။သူ့ရဲ့ အညိုးအတေးတွေကြောင့် ထုံးစံအတိုင်း နိုင်ငံတွင်းက ဂျူးလူမျိုးတွေမှန်သမျှကို တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်လာတဲ့အခါမှာတော့.....တူဗီယာတို့ ညီအကိုတွေဟာ နာဇီတွေဝင်ရောက်မလာခင်ကတည်းက ပြစ်မှု့တစ်ခုကြောင့် တောထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အချိန်အကြာကြီးနေခဲ့တာကြောင့် တောကိုလည်း ကျွမ်းကျင်နေကြပါပြီ။စစ်ကြီးစဖြစ်တော့ အခြားသူတွေကလည်း သူတို့လို တောထဲကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြပါတယ်။တူရာတူရာတွေ စုမိကြရင်း နောက်ဆုံး ရွာတစ်ရွာတည်နိုင်လောက်တဲ့အထိများပြားလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာ သူပုန်လိုလို တော်လှန်ရေးသမားတွေလိုလို ဖြစ်လာကြပါတော့တယ်။ဒီကားဟာ ဖြစ်ရပ်မှန်ဝတ္တုဖြစ်တဲ့ Defiance : ...
Tracks (2013) (Unicode)ဒီတစ်ခါ မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ဩစတေးခလျ Drama ကားကောင်းလေး တစ်ကားပါနာမည်ကတော့ Tracks ပါဒီကားလေးကိုတော့ ရော်ဘင်ဒေးဗစ်ဆန်ရဲ့ ဩစတေးလျသဲကန္တာရကို ကုလားအုတ်တွေနဲ့အတူ ၉ လကြာခရီးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို မှီငြမ်းပြီး ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်သူ ဒီခရီးကို မစတင်ခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် ကုလားအုတ်တွေရဖို့သူကိုယ်တိုင် ကြိုးစားခဲ့တာတွေကို ပြပေးထားတဲ့အပြင် တကယ်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတာတွေကိုလည်း သေချာရိုက်ပြထားပါတယ်သူခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ကုလားအုတ် ၃ ကောင်ကုလားအုတ်ပေါက် ၁ ကောင် နဲ့ သူ့ရဲ့ သစ္စာရှိခွေးလေးနဲ့အတူ သွားခဲ့တာပါသူ့ကို ခရီးစရိတ်ရဖို့ National Geographic က ဓာတ်ပုံဆရာ ရစ်က စပွန်ဆာရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တာပါသူတို့ လမ်းခရီးမှာ ...
Wild (2014) (Unicode)2014 ကတည်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Wild ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဟာ American Biographical Adventure Drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၂၀၁၂တုန်းက Cheryl Strayed ရေးသားခဲ့တဲ့ Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail(PCT) ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်ကားထဲမှာ Cheryl နဲ့ Bobbi အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Reese Witherspoon နဲ့ Laura Dern တို့ နှစ်ယောက်လုံးဟာလည်းအော်စကာဆုအတွက် Best Actress နဲ့ Best Supporting Actress အဖြစ်စကာတင်အရွေးခံခဲ့ရပြီး အခြားသောဆုတွေမှာလည်း စကာတင်အရွေးခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။Rating တွေအနေနဲ့လည်း Rotten Tomatos မှာ 89%....IMDb rating 7.1/10 အထိရရှိထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဘဝမှာအချစ်ရဆုံးအတွယ်တာရဆုံး မိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားပြီးနောက်ပူဆွေးသောကတွေရောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်အောင်ပျက်ဆီးသွားပြီကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေးကိုပါဖျက်ဆီးမိခဲ့တဲ့ Cheryl Strayed ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ....ကိုယ်လမ်းမှားရောက်နေတာကိုသတိထားမိပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ထူထောင်ဖို့နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေပြန်စုစည်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအရှည်လျားဆုံးခရီးကြမ်းရှည် ...
The Kitchen (2019) Hell’s Kitchen လို႔ေခၚတဲ့ နယ္ေျမေလးမွာ လူမိုက္အဖဲြ႔ က်င္လည္က်က္စားပါတယ္။ဆက္ေၾကးေကာက္လိုက္ လူသတ္လိုက္ ဓားျပတိုက္လိုက္ လုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႔ပါ ဇာတ္လမ္းအဖြင့္မွာေတာ့ လူမိုက္အဖြဲ႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ေရာ့ဘ္၊ ကယ္ဗင္နဲ႔ ဂ်င္မီတို႔ သံုးေယာက္သားဟာဆုိင္တစ္ဆိုင္ကို ဓားျပ၀င္တိုက္ရင္း အက္ဖ္ဘီအုိင္ရဲ႕ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံလိုက္ရပါေတာ့တယ္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေနရင္ လြတ္လာမယ္ထင္ေပမယ့္ဗဟိုကတိုက္ရိုက္ကိုင္တာမို႔လို႔ ေထာင္သံုးႏွစ္စီအသီးသီးက်သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အဖြဲ႔ကလစ္တဲဂ်က္ကီ ဆိုတဲ့တစ္ေယာက္စီ ေခတၱလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရပါေတာ့တယ္ သူတို႔မိန္းမေတြကို အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ေပးထားမယ္ထင္ေပမယ့္မသထာေရစာ ေလာက္သာ ေပးကမ္းထားတဲ့အခါမွာေတာ့မိန္းမသားတန္မဲ့ လူမိုက္အဖြဲ႔ေထာင္ဖို႔ ဇာတ္လမ္းဖန္လာပါေတာ့တယ္ ဆက္ေၾကးေပးေပမယ့္ ကာကြယ္ေပးျခင္းမခံရတဲ့ဆိုင္ေတြ..ဆက္ေၾကးေကာက္ထားေပမယ့္ ဘာတစ္ခုမွျပန္မလုပ္ေပးတာေတြကိုသူတို႔ျပဳျပင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လူမိုက္ဖြဲ႔ေထာင္လိုက္တာေယာက်ာ္းေတြထက္ေရာ လက္ရွိ လူမိုက္အဖြဲ႔ထက္ပါလက္ေဇာင္းေတြထက္ကုန္လို႔ ရဲေတြေရာ နာမည္ၾကီးလူမိုက္အဖြဲ႔ေတြကပါသူတို႔ကို ေျပာင္းေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့အဆင့္ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္ စိတ္နဲ႔မတည့္ရင္သတ္ထည့္လိုက္တဲ့အဆင့္ထိ ၾကမ္းလာတဲ့အခါမွာေတာ့ဂုိဏ္းထဲမွာအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲမႈေတြ ေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ သူတုိ႔ကိုအႏုိင္က်င့္တတ္တဲ့သူတို႔ေယာက်ာ္းေတြက ေစာျပီးလြတ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့… သူတုိ႔ေတြဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ပါ့မလားအႏုိင္က်င့္တတ္တဲ့ေယာက်ာ္းေတြလက္ကလြတ္ႏုိင္ပါ့မလား လူမိုက္ဂိုဏ္းကိုမိန္းမသား ၃ ေယာက္တည္းနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာကိုစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါတခ်ိန္းခ်ိန္းခ်မေနေပမယ့္ တဒိုင္းဒိုင္းနဲ႔ေတာ့သတ္ေနတဲ့ကားပါ ...
Saving Mr. Banks (2013) (Unicode)Saving Mr. Banks ဇာတ်လမ်းကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်က Walt Disney Pictures က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Merry Poppins ဆိုတဲ့ အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ကူးတဲ့အပေါ်မှာ အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။Walt Disney ရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်က စာရေးဆရာမ P.L Travers ရေးတဲ့ Merry Poppins ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို အရမ်းကြိုက်တဲ့အတွက် ကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးဖို့ Walt Disney က ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း Merry Poppins ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်ကို P.L Travers က ငြင်းဆန် နေခဲ့ပါတယ်။နှစ် ၂၀ လောက်ကြာတဲ့အခါမှ ငွေကြေးအခက်ခဲတွေ ကြောင့် ဇီဇာကြောင်တတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် အဖွားကြီး Travers တစ်ယောက် Walt Disney ရဲ့ ကမ်းလမ်းမှုကိုလက်ခံပြီး Walt Disney ...
What We Do in the Shadows (2014) (Unicode)ဗီယာဂို ၊ ဒီယေဂို နဲ့ ဗလာဒစ်စလာဗ်တို့ဟာ တစ်အိမ်တည်းမှာ အတူနေထိုင်ကြတဲ့ ဗင်ပိုင်းယားသူငယ်ချင်း (၃)ယောက်သူတို့ရဲ့ သက်တမ်းတွေဟာလည်း နှစ်ပေါင်းရာချီနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လိုပဲ လူတွေနဲ့ရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့ ဗင်ပိုင်းယားတွေ ၊ သမန်းဝံပုလွေတွေ ၊ စုန်းမတွေဟာလည်း ယနေ့ ခေတ်မှာအများအပြား တည်ရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စုပေါင်းပြီးပါတီပွဲကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းကာ သူတို့ရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံတွေ ၊ ရှာဖွေစသောက်ရပုံတွေကို လက်ခံရိုက်ကူးစေခဲ့ပါတယ်။ဒီကားကတော့ ယနေ့ခတ်မှာ ဗင်ပိုင်းယားတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်ရှာဖွေစားသောက်ရသလဲဆိုတာတွေအခက်အခဲတွေ အလွဲတွေကို Documentory ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Comedy, Fantasy, Horror ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ။Documentory ကားဆိုပေမယ့် မူးနောက်စေမယ့် ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်တွေ မပါဝင်ပါဘူး။ဒီကားကိုပဲအခြေခံပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာ What We Do in the Shadows (2019) ဆိုတဲ့ Series ထွက်ရှိထားပါတယ်။ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့ ချီးကျူးမှု့တွေကိုလည်း ရရှိထားတဲ့ ဟာသကားကောင်းတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ ...